Wax ka ogow Somalida iyo Qoomiyada Oromada ma dad is dhalaybaa ? | SOMALI SUN |
Wax ka ogow Somalida iyo Qoomiyada Oromada ma dad is dhalaybaa ?
Sep 21, 2017 - Aragtiyood
Soomaalida iyo Oromada waxa ay ku wada nool yihiin laba gobol oo xuduud aad u dheer wadaaga. Sidoo kale waxay deris ku yihiin nawaaxiga xuduuddaha Kenya iyo Itoobiya.
Taasi waxaa lagu sheegay mid ka mid ah sababa ay u soo noqnoqdaan dagaalka mararka qaar dhexmara labada dhinac.
Xaaji Cali Xaaji Xuseen Somow oo ka mid ah odayaasha shirka ka qeybgalay ayaa sheegay “Waa dad wada joogi jiray, waa dad aan weligood isdilin”.
Soomane Maxamed Cali oo ka mid ahaa Soomaalida ku sugnaa kullanka ayaa yiri: “Waa dad wada dhashay oo deegaan wadaaga muddo, dad isku cusub ma aha, marka colaadda hala joojiyo, dagaalkana lagu badalo wanaag iyo wadahadal”.
Sanadkii 2004, afti laga qaaday 420 tuulo ama waxa Itoobiya looga yaqaan qabele oo lagu muransanaa, ayaa boqolkiiba 80 loo go’aamiyay in ay ka tirsan yihiin gobolka Oromiya.
Go’aankaasi ayaan weli la hirgelin, waxaana la sheegayaa in ay qeyb ka tahay colaadda hadda soo cusboonaatay.